Dhedo roob noqon weyday’ Qaybtii 3aad Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale | Salaan Media
Ma laga yaabaa in aad rumaysan weydaan, laammi ayaa hadashay. Sow ti Gaarriye Maansadiisii Tanaad ee 1972kii ku lahaa:
Kaftan ay taqaannay,
Hoos-ka-tuur u leedahay,”
Barbaarta hadda maansada la oogsatay mid yar oo ka mid ah oo tixdan Gaarriye gabay-dheegtay oo laamiyada iyo dhismayaasha ku takhasusay ayaa isagana laga hayaa:
“Waddaduna tibaax bay,
Marka ay tabaaliyo,
Taababkay u goysaa,
Hadba taar ka siibtaa,”
Tabashadii dadka iyo dalkaba tii kale ayaa ka badatay. Miyaydaan arag dhowr calan oo yar yar oo Madaxtooyada horteeda sudhan oo lagaga tegay sidii Meey dhowr iyo tobankeedii loo sudhay. Habeen walba waa ay is-haystaan markii ay dhaxantii dabayl-xagaada beer-qaadeen. Mid ayay isugu tagaan ay ku haystaan in uu badkhaarka ka soo saaray oo ku yidhi: “Madaxtooyada ayaa la inagu hor xidhayaa, isla markiibana waa la inaga furayaa oo makhsin qaboojiye leh ayaa la inagu xeraynayaa ilaa Meeyda dambe.”
Wuxu intaa ugu daray in ay sidaas kaga daryeel fiicnaanayaan calammada kale isla markaana ka cimri-dheeranayaan. Sidaas ayay dhowrkaa calanna habeen walba miskiinkaa yare ee isaguba ka midka ah u qabsadaan. Habeen, habeen ayaa waxa soo mara Calan-guun oo nin da’ weyn oo waayo-arag ah in bandanna cilmi-baadhis ku sameeyay taariikhda iyo waayaha calammada. Markaasu ku yidhaahdaa:“Waar miyaanay habeen ahayn maxaa meesha idin sudhay? Ma idiinkaan calammo ahayn, mise cid idin yeelataa weydeen? Waa maxay habeennimadan aad sudhan tihiin?”
Markaas ayay calammada yar yari yaabaan oo yidhaaahdaan: “Oo calammadu miyaanay dibadda u hoyan jirin.” Markaas ayuu ku yidhaahdaa: “Waar annagu calammadii aanu arki jirnay, lixda subaxnimana ayaa la sudhi jiray, lixda galabnimana waa la dejin jiray oo weliba bigil ama garri ayaa loo afuufi jiray, maarkaasaa inta u dhow ee uu muuqdo oo dhami is-taagi jirtay.” Marka uu intaa yidhaahdo ayay calammada yar yari isku yaac-yaacaan, su’aalo ayay isku boobaan:“Garri….bigil….Miyaa maqasheen? Miyaad aragteen? Hammaa la inoo tumayba. Bal eega Calan-guun badhaadhaha iyo beri-samaadka soo maray.” Markaas ayuu Calan-guun ku odhanayaa: “Iska aammusa waqti loo calaacalaa idin ma dhaafin e’.” Calan yar oo dabayl-xagaadu laba meelood ka dillaacisay ayaa taahaya oo odhanaya: “Waar dillaac kale ayaa igu furmay e’, iga aammusa aan yar laamadoodo e’ (seexdo e’).”
Sidaas ayuu Calan-guun kaga tegayaa isaga oo labada dhaban gacmaha ku haya oo leh: “Hadda waa Madaxtooyadii.” Intii uu calammada yar yar la sheekaysanayay ayaa qaar ilaalda Madaxtooyada ahi ka yar shakiyeen, laakiin markiiba Taliye Maleeg oo ciidanka ilaalada hor-jooge u ahaa oo dhowr habeen oo hore arkay ayaa ku odhanaya: “Waar ka taga waa la idiin yaqaan ninkan odeyga ah e’.”
Ninkii odeyga ahaa ee Calan-guun oo in badan qurbaha ku maqnaa ayaa iska tallaabsaday. Cabbaar markii uu socday isaga oo suuqa ku sii jeeday ayuu midigta yar jalleecay mise waa intaas oo shub ah oo teedsan Madaxtooyada horteeda. Isaga oo cod hoose iskula hadlaya, ayaa wuxu yidhi:
“Oo tolow bahalahan fool-xumadooda, maxay gudaha u gelin waayeen oo deyrkan samaysan ee quruxda badan xagga hore u soo marin waayeen. Xataa dhul ballaadhan oo salaanta Iidda Meey lagu qaato ayaa ka soo hadhi lahaa.”
Wuxu intaa ku daray oo ku sii kabay: “Dadka meesha gala, ka shaqeeyaa ama hor maraa miyaanay fool-xumadan kuus-kuusan arkayn. Sow la moodi maayo in aanu dalkuba ammaan ahayn.”
Intaa marka uu Calan-guun naftiisa kula hadlayo, aayar ayuu tallaabsanayaa. Cali-daad oo baci ku xidhan tahay oo caqliga jeebka ku sita, marka uu doonana la soo baxa oo xaggaa shacabka u sii hoyanayay oo ag marayay ayaa hadalkii ku duulay. Cali-daad ayaa inta uu yar ilko-caddeeyay, Calan-guun ku yidhi:
“Dadka wax dhaadaya ee arkayaa xaggee ayay joogaan sow tan indhihii wax lagu arki lahaa dalqada loo rogay. Miyaanad ogeyn in daamanka oo keliya lala doogsin-cararo oo dadka doocii iyo dareenkiiba laga dilay. Ma waxaan dollar iyo dirham ahayn ayaa maanta la arkaa. Han la doojiyo mooyaan e’, ma cid baa dal iyo dad xusuusata.”
Cali-daad ayaa inta uu shaadhka laacay soo jeediyay Calan-guun oo la yaabban. Ku-ye: “Ma dhawaan baad, adeer, dalka timid waadigan nala yaabban e’. Intii dirindiirta iyo koronkorradu nagu biqleenba, sidan iyo si ka daran ayaanu iska ahayn.”
Sidaas ayay ku kala hoydeen Calan-guun iyo Cali-daad iyaga oo qiiraysan oo midba dhinac u dhaqaaqay iyaga oo hadba dib u soo jeedsanaya oo isa soo eegaya.